Tantara: Olona Goavana Teto An-tany - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Tsarovy fa niezaka nitondra ﬁkorontanana i Satana, ilay anjely ratsy. Nanandrana mihitsy aza izy nitarika ireo anjelin’Andriamanitra mba ho ratsy. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanomboka nihaino an’i Satana ny sasany tamin’ireo anjely ireo. Nitsahatra tsy nanao ny asa nampanaovin’Andriamanitra azy ireny tany an-danitra izy. Dia nidina tetỳ an-tany izy ary nanao vatan’olombelona ho azy ireo. Fantatrao ve hoe nahoana?
Indray andro dia nambaran’Andriamanitra tamin’i Noa fa tonga ny fotoana handringanany ny olona ratsy rehetra. Nefa hamonjy an’i Noa sy ny ﬁanakaviany ary maro amin’ny biby, Andriamanitra. Aoka hojerentsika ny fomba nanaovan’Andriamanitra izany.